Pakistan: Voasivana ny lahatsary iray mampiseho ny herisetran’ny miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2019 3:48 GMT
Vakio amin'ny teny polski, русский, English
Niparitaka tamin'ny aterineto ny horonantsary iray mampiseho ny herisetra miaramila nandritra ny fanafihany tao Swat.
BBC: Mampiseho manamboninahitra iray manao fanamiana adin'ny tafika Pakistaney manadihady olona ahiahiana maromaro ilay lahatsary, efa somary antitra ny sasany amin'ireo olona ahiahiana ireo ary voalaza fa havan'ireo olona tadiavina.
Rehefa tsy nahazo valiny mahafa-po ilay manamboninahitra, dia nampiantso ny miaramilany hirohotra sy hidaroka azy amin'ny fehikibo, totohondry sy karavasy. Ao anatin'izany, dakan'ireo miaramila manana baoty mavesatra manerana ny vatany ireo olona ahiahiana. Re mihiaka sy mitalaho amin'ireo miaramila mba hitsahatra amin'ny anaran'i Allah ireo olona, milaza imbetsaka fa efa nolazainy tamin'izy ireo izay fantany rehetra. Tamin'ny tranga roa manokana, dia nosakanan'ireo manamboninahitra mpibaiko ireo miaramila manao ny fidarohana.
Taorian'ny fanasaziana voalohany, nilaza tamin'olona ahiahiana iray ilay manamboninahitra fa “mbola sazy malefaka” izany. Raha tsy milaza ny zava-drehetra ny olona ahiahiana, hoy ilay manamboninahitra dia tsy maintsy manatanteraka “sazy henjana” izy. “Tsy tianao hanapaka ny tananao sy ny tongotrao aho,” hoy ilay manamboninahitra.
Tamin'ny fanontaniana ho an'ny mpitondratenin'ny tafika, nilaza ny Jeneraly Athar Abbas fa efa nanadihady ny fanararaotam-pahefana voalaza ny tafika, saingy tsy nety nanao fanehoan-kevitra hafa.
Nampiantranoin'ny PkPolitics.com tao ao amin'ny lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe Fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny tafika Pakistaney ilay lahatsary, izay nahatonga ny Governemantan'i Pakistan hanakana ilay URL manokana any amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto isan-karazany ao Pakistan, mba hampiseho hoe “Voarara ity tranonkala ity“, nampiasaina tamim-pahombiazana ny vavahadin-tserasera Herdict Web mba hanaraha-maso ny vaovao malaza manerana an'i Pakistan izay ahitana ny tatitra voamarina momba ny tsy fahazoan'ireo mpamatsy tolotra aterineto miditra, na dia tsy nanakana ilay URL manokana aza ny mpanome tolotra aterineto sasany.